किन घट्यो १५ लाखबाट ढाई लाखमा राहत ? – sunpani.com
किन घट्यो १५ लाखबाट ढाई लाखमा राहत ?
सुनपानी । २२ मंसिर २०७७, सोमबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – कोरोना त्रास बढ्दो थियो । कोरोनाका बिरामी बढेसँगै बीमाले खुब चर्चा पायो । कर्मचारीको मात्रै होइन, घरका सबै परिवारको बीमा गर्न थालियो ।
बाँकेमा पहिलो पटक नेपालगञ्जका ६० वर्षका मोहम्मद हुसैनलाई बैशाख १९ गते कोरोना पुष्टि भयो । त्यसपछि नेपालगञ्जमा अझ त्रासदी बढ्यो । जेठ १ गते कोरोना पुष्टि भएका २५ वर्षका अनिस अन्सारीको जेठ ३ गते नरैनापुरमा मृत्यु भयो । अनिस कोरोनाबाट मृत्यु हुने जिल्लाका पहिलो व्यक्ति हुन् ।
कोरोना संक्रमित थपिने र मृत्यु हुने क्रम चलिरह्यो । यसमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि परे । यहीबेलामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको मृत्यु भएमा १५ लाख रुपैया दिने निर्णय ग¥यो ।
कोरोनाको त्रास बढ्दो रहेको बेलामा बोर्डले उक्त निर्णय ग¥यो । कोरोनाले धमाधम मान्छे मर्न थालेपछि भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पदाधिकारी झस्किए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी धेरै जनाको मृत्यु भयो भने त धेरै १५ लाख जान्छ, ल्याउने कहाँबाट ?
पदाधिकारीहरुले जुक्ति निकाले, बोर्ड बैठकको निर्णय संशोधन गर्ने । त्यसै अनुसार, बोर्डको बैठक संशोधन गरिएको छ । पछिल्लो बोर्ड बैठकले कोरोनाबाट जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको मृत्यु भएमा दुई लाख ५० हजार रुपैया दिने निर्णय भएको छ । यो बीचमा एकजना जनप्रतिनिधि र एकजना उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का सदस्य ६७ वर्षीया शान्तिसिंह परियार र जिन्सी शाखाका युवराज घलेको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । उनीहरुलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले १५ लाखका दरले राहत दिन्छ कि दुई लाख ५० हजार, हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
‘शुरुमा कोरोनाको त्रास बढ्दा सबैले जोशिएर १५ लाखको निर्णय गरे । पछि बाँकेमा धमाधम मृत्यु हुन थालेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी झस्किए, स्रोतले भन्यो, धेरै जनाको मृत्यु भयो भने १५ लाखका दरले दिइने बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने छलफल भयो । पछिल्लो बैठकले पहिलाको बोर्डको निर्णय नै संशोधन ग¥यो ।’
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष सुनिलसिंह हमालका अनुसार, बोर्डले १५ लाखको निर्णय संशोधन गरेर दुई लाख ५० हजार रुपैया गरेको छ । मृतक वडा सदस्य र कर्मचारीका परिवारलाई राहत दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार, नेपालगञ्जका ९ जना जनप्रतिनिधि र ७४ जना कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो । त्यसमा एकजना जनप्रतिनिधि र एकजना कर्मचारीको मृत्यु भयो ।
कोरोनाबाट बाँकेमा ३९ जनाको मृत्यु हुँदा एकजना जनप्रतिनिधि र एकजना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी पनि परेका हुन् ।
हतार र हौसिएर गर्ने कतिपय निर्णयहरुबाट पछि हट्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा दुई वटा बोर्ड बैठकले देखाएको छ । वडा सदस्य हमालले मृतकले अढाई लाख राहत र एक लाख रुपैया बीमाको रकम पाउनु बताउनुभयो । (युगबोधबाट)